Habka si rasmi ah loo bilaabay Isweydaarsiga Sakarya SGK | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara54 SakaryaNidaamka Isweydaarsiga Sakarya SGK si rasmi ah ayaa loo bilaabay
14 / 01 / 2020 54 Sakarya, GUUD, WADADA, Gobolka Marmara, TURKEY
Howlihii isgoyska sgk ayaa si rasmi ah u bilowday
Kulankii Golaha Janaayo, 61 qodob ayaa laga wada hadlay oo la xaliyay. Duqa magaalada Ekrem Yüce ayaa yidhi, Wek Waxaan bilownay hawlgalkii mashruuca ee aan ka dhisi doonno Is-weydaarsiga SSI oo meel muhiim ah ka ah gadiidka magaaladeenna. Isgoyska SGK wuxuu ku dhamaan doonaa waqti ilaa waqti cufnaanta baabuurta gobolka gaadiidkuna raaxo ayey yeelan doonaan. Nasiib wacan Madaxweynaha Yüce, Sabiha Gokcen Airport ayaa ku dhawaaqay in howsha ay bilaabeen gaadiid.
Dawladda Hoose ee Magaalada Sakarya Bishii Janaayo Kulankii Golaha waxaa lagu qabtay Hoolka Golaha ee Dawlada Hoose. Kulankan oo wadarta guud ee ajendaha 9 lagaga dooday 61 ajanabi oo dheeri ah kadib khudbadaha ka soo baxay ajandaha, Duqa magaalada Ekrem Yüce ayaa sharraxay shaqooyinka la qabtay bilihii Diseembar iyo Janawari; iyo waxyaabo muhiim ah oo lagu soo daray qodobbada ajendaha. Duqa magaalada Yuce, oo rajeynaya in Goluhu kaalin weyn ka qaato samafalka, ayaa ku dhawaaqay in shaqada Sakarya ay sii socon doonto.
Hawsha ayaa bilaabatay Isweydaarsiga SSI
Duqa magaalada Ekrem Yüce ayaa yidhi, “Marka ugu horreysa, waxaan si rasmi ah u bilaabaynaa geedi socodka mashruuca, kaasoo meel aad u muhiim ah ku leh gadiidka magaaladayada waxaanan ka dhisi doonnaa Isweydaarsiga SSI. Iyada oo la adeegsanaayo Isugeynta 'Multi-Storey Junction', cufnaanta baabuurta waxay ku dhamaan doontaa waqti ka waqti waqti gobolka iyo gaadiidku waxay noqon doonaan kuwa raaxo leh. Mar labaad, waxaan jeclaan lahaa inaan la wadaago horumarin dheeraad ah xagga gaadiidka. Gaadiidka ku taga garoonka diyaaradaha Sabiha Gökçen ayaa sanado badan la dalbanayay. Go'aanka Golaha, waxaan sidoo kale bilaabi doonnaa tagitaanka garoonka diyaaradaha. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo shirkadaha geeya garoonka diyaaradaha Sabiha Gökçen. Annagu kuma tala jirno inaan xiro. Marka hore waxaan qaban doonnaa taxane-taxane ah ka dibna adeeg gaadiid oo isdaba-joog ah. Waa in aan sidoo kale la furo qaws on automakers gudaha Turkiga. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dhammaan dadkii gacan ka geystey Madaxweynaheena Recep Tayyip Erdoğan, oo riyadii dalkeena ka dhigay mid dhab ah 60 sano. Waxaan ku hanweynahay shaqadan oo ah mid ku faanaysa waddankeena. Waxaan mar labaad cadeynayaa inaan rajeynayno 54 gawaarida guryaha, kuwa qaranka iyo korontada ah, in loogu adeego howlaha Degmooyinka Waaweyn.
Dariiqyadu waxay u baahan yihiin tusaale muunad ah
Duqa magaalada Ekrem Yüce wuxuu cadeeyay in howlaha ka socda magaalada ay sii soconayaan wuxuuna yiri: Wek Waxaan dhameystirnay howlaheena wadada Lüleci iyo Alifuatpaşa Suat Yalkın Street. Erenler Hacıoğlu Xaafadda Şehit Yaşar Güller Street ayaa sidoo kale sii wadaysa shaqadeena. Waxaan dhisaynaa wado u qalanta Hacıolu. Waad ogtahay, Jannadii Qaranka inay dhamaaneyso. Annaga oo tixgalineyna tirada gawaarida gobolka kusoo kordhin doonta markii la furay, waxaan u rogi doonaa waddada xagaaga oo idil laba waddo. Sanadka 2019, waxaan dul saarnay 304 kun oo tan oo ah asfardood 426 kiiloomitir oo jidadka laamiga ah. Waxaan rabaa inaan halkaan ku dhawaaqo; Waxaan rajeyneynaa, sanadka 2020, waxaan sii wadidoonaa shaqadeena fahanka guud ee magaalada oo dhan. Marka laga reebo waddooyinka waaweyn, waxaa aad uga faa'iido badan in la sameeyo wax la taaban karo halkii laga dhigi lahaa macdanta loo yaqaan "asphalt". Waxaan u aragnaa inay tahay mid maxalli ah, wax ku ool ah, nadaafadeed iyo dhaqaale ”.
Mashaariicda cusub ee magaalada ayaa la soo gabagabeeyey
Duqa Ekrem Yüce ayaa yidhi, “Guutadayada Dabdemiska Hendek ayaa si dhakhso ah u dhammays tiran waxaanan bilownay inaanu u shaqayno Akadeemiyadda Caruurta ee Erenler. Waxaan hiigsaneynaa inaan bilowno xagaaga. Waxaan dhisaynaa 24 iskuul oo cusub oo leh 2 fasal oo ku yaal aagga dugsiga sare ee Adapazarı Anatolian Imami-Hatip iyo cutubyo guryo milateri ay ku yaalliin. Shaqadeenu way bilaabantay. Dabcan, kama hadli karno Noramgic Tram. Waxaan shaaca ka qaadnay mashruucan oo neef cusub u keenaya bilicda iyo quruxda magaaladeena oo dabooleysa dariiqyada Millet Garden ee Masjidka Yeni. Waxaan bilownay inaan ka shaqyno taraam lagu dhisi doono kun 800 oo mitir. Waxaan dardargelinay dadaalladayadii Karaman Park. Waxaan u adeegi doonnaa muwaadiniinteenna ”.
Dooxada Melen Botanical
Duqa magaalada Yüce ayaa ku dooday inay faafin doonaan wacyigalinta deegaanka ee dhan Sakarya isla markaana loo baahan yahay in bulsho abuur ah la abuuro. Waxaan bixinaa tababaro lagu kobcinayo wacyiga deegaanka ee carruurteenna mustaqbalka. SEKAY, waxaan ka dhalinaa koronto qashinka waxaanan qiimeynaa qashinka guriga. Si looga hortago wasakheynta buuqa, waxaan ku dhameystiri doonnaa Khariidadda Noise sannadka 2020 annaga oo isku dubaridna Wasaaradda Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka. Waxaan dhawaan la saxeexnay borotokool Agaasinka Gobolka ee Dhirta Melen Botanic Valley. Waxaan ku xoojin doonnaa labada dhinacba geedaha linden iyo acacia. Dhexdhexaadku wuxuu noqon doonaa baaskiil wadooyinka iyo wadada xigta wadada lugaynaya. Aagga 7-kiiloomitir waxaa ku jiri doona dhir dawo. Waxaan gelin 70 nooc oo dooxadaas ah. Waxaan abuuri doonnaa doox ur, caafimaad iyo cabbitaan. Buundada hoosteeda, waxaan ku dhisi doonnaa daboolka malabka. Sidan, waxaan ku horumarin doonnaa shinnida geedaha kala duwan. Meelaha gebi ahaanba nadaafadda, XNUMX boqolkiiba jelly boqornimo dabiici ah oo saafi ah ayaa hadda lagu waafajinayaa dammaanadda Dawladda Hoose. Waxaan sidoo kale magaaladayada ka hirgelin doonnaa Mashruuca Guryaha Malaayga. ”
Go'aannadeena ha ka faa'iideystaan ​​magaaladeena
Dhaqanka iyo nashaadaadka fanka ayaa sii socon doona sanadka 2020. Xarunta horumarinta bulshada iyo SAMEKs waa u adeegaya caruurteena, dhalinyarada iyo qoysaskeena. Waxaa jira danno aad u daran oo ku saabsan SGM-yada. Aad bay noogu faraxsan yihiin. Xaaladaha xilliyada, agoonta, muwaadiniinta baahan, waxaan dhahnaa 'Cidna Joogin Jidka'. Waxaan jeclaan lahaa inaan casuumao labada degmo iyo xubnaha Golaha iyo sidoo kale magaaladeena oo dhan inay xasaasiyad ka muujiyaan arrintan oo aan ka codsado inay soo sheegaan markay la kulmaan xaaladdan oo kale. Markasta oo aan caawino dhibanayaasheena, waxaa sii muhiim ah waa. Sayidku ha u yeelo go'aanno wanaagsan magaaladeenna. Midnimadeenna iyo wadajirkeenu ha ahaado mid joogto ah.
Qodobka 1-aad ilaa 19-aad ee Wareegtada iyo Howlaha Guud, qodobka 20-aad maadaama ay ka imaaneyso guddiga sharciga waxaa qaatay cod aqlabiyad ah Qodobbada 21 illaa 45 ayaa tixraacaya Guddiga Dib-u-Dhiska iyo Howlaha Guud, waxaana qodobka 30-aad wax laga beddelay si mideysan si loogu gudbiyo Guddiga Dib-u-dhiska iyo Howlaha Guud. Qodobka 46aad ayaa si wada jir ah loogu gudbiyey Guddiga Qorsheynta iyo Miisaaniyadda. Qodobbada 47 illaa 51 ayaa si aqlabiyad ah loo aqbalay. 52. Waxay hoos imaanaysaa baaxadda guddiga kormeerka MHP Mehmet Ir, AKP Karahasan Mustafa, Yakup Ayar, Cemil Kocacik, Elite Akca. Waxaa si wada jir ah loogu meel mariyey Qodobka 53aad ilaa Qodobka 58aad. Qodobka 59-aad waxaa si wada jir ah loogu gudbiyay guddiga sharciga iyo qodobka 60-aad iyo 61-aad ee loo diray guddiga maaliyadda iyo howlaha guud.
Nidaamka qorista ee hal kun oo shaqaalaha 750 ee PTT ayaa bilowday
Geedi socodka Metro ee saddex magaalo waaweyn
Nidaamka Khatarta ah ee Nidaamka Tareenka ee Giriigga Shaqaalaha Dhibcaha
Nidaamka lama huraanka ah ee Tüvasaş wuxuu bilaabi doonaa Erol Inalla
Tababaraha Qaranka ee Tababaraha Khatarta (Sawir Sawir)
Geedi socodka adkaa ayaa ka soo go'ay Gacanka Hoose ee Gacanka
Nidaamka ugu dambeeyay ee dhismaha dhismaha tareenka BTK
Hawlgabka Cold Railroad ayaa si dhaqso ah u socda
Hannaanka loogu talagalay hindisaha Bridge iyo Motorway mar kale ayaa bilaabmaya
Dawlada Hoose ee Magaalaweynta Sakarya Shirka Golaha Janawari
Iskuxiryada Baska ee taga garoonka Sakarya Sabiha Gökçen
Isweydaarsiga Sakarya SGK
SSI Multi-Storey Junction